Pipewire inotarisira kutsiva PulseAudio uye JACK | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Red Hat Kubudirira Chikwata Haamire kushanda nesimba kubva pakuvandudzwa uye kutsigirwa, kune tarisiro yekugadzira maturusi matsva ekuvandudza iyo ecosystem yeLinux. Zvakadaro izvo vane chirongwa chinodadisa chitsva chinonzi Pipewire.
Chinangwa chekuvandudza odhiyo uye vhidhiyo kubata muLinux. Pipewire akazvarwa pasi pechirongwa chekuti aigona kutsigira odhiyo uye vhidhiyo nenzira imwechete nenzira yakawiriraniswa uye iri zano raive yakagadzirwa neruoko rwaWim Taymans co-musiki weGStreamer.
Rimwe rematambudziko makuru rakatarisana neprojekti yePipewire ichave kuwiriranisa odhiyo nevhidhiyo pamusoro pechinhu chimwe chete ichocho, sezvo ini ndaive ndajaira kushanda muGStreamer.
Nenzira iyi ndezvechokwadi kuti odhiyo nevhidhiyo zvinoshanda mushe pamwe chete, nekuti nenzira iyi zvingave nyore kwazvo kune maFreyimu senge GStreamer uye nekudaro vangangoda basa risingareme zvakanyanya kuti riite.
Kukura kwe chishandiso chitsva ichi chichava nekusimbisa kwakakosha pakutsigira Wayland neFlatpakIvo vanoda kusimudzira iyo yekupedzisira kunge ramangwana standard tekinoroji mukati meGNU / Linux.
Mukati zvirongwa zveramangwana izvo chirongwa ichi chainacho kusanganisa madhodhi akavakirwa paffmpeg uye demuxers kugadzira mapaipi ekuberekesa. Zvakare nekuwedzera rutsigiro kune iwo Chrome uye Firefox mabhurawuza kuitira kuti iwe ugone kugovera yako Wayland desktop kuburikidza nemaitiro akaita seBlue Jeans.
Sezvakataurwa, chirongwa ichi chichiri muchikamu chekusimudzira sezvo chave nenguva yakati wandei mumiyedzo yeiyi. Nemashandiro akasiyana siyana akakwenenzverwa, iyo Wayland yakanangiswa, rakadaro simba rekubata iyo skrini pairi kubvira pasi peX haina kuchengetedzeka.
Ndokusaka basa rakaitwa mukugadzirwa kweAPI kuitira kutsigira zvese screen capture uye imwechete furemu kubatwa, yemunharaunda desktop kurekodha uye kure kuwana maprotocol.
Pari zvino chirongwa ichi chinotanga kubata muFedora Workstation 27 beta kwaunogona kuedza kutanga kupa pamwe nekuonekwa kwetsikidzi uye iwe unogona kuenderera uchikwenya.
Kana iwe uchida kuziva zvishoma zvishoma nezve iyo projekiti iwe unogona kutarisa yayo webhusaiti yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Pipewire inovavarira kutsiva PulseAudio uye JACK
Kana ichiuya kubva redhat iyo ine chokwadi ine kumwe kutsamira pane systemd
Pipewire muna Chikunguru 2021 chete HAZVISHANDI.
Pindura kuna vacoidz